भ्रष्टाचार रहित २१औँ शताब्दि सुहाउँदो स्थानिय निकाय बनाउँछुः प्रवेश लामिछाने | KTM Khabar
२०७४ बैशाख २२ गते ०८:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । लामो समयको अन्तरालमा स्थानिय निकायको चुनाव हुदैछ विभिन्न पार्टीहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लिएर उम्मेद्वारलाई मैदानमा उतारेका छन ।
यत्ति बेला नेपाली कांग्रेसको तर्फवाट काठमाण्डौ महानगरपलिका वडा नं. ७ मा प्रवेश लामिछाने आफ्नो टिम सहित वडा अध्यक्षको रुपमा चुनाबि मैदानमा छन् । कांग्रेसको ईकाइ सभापति समेत रहेका लामिछाने अहिले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा जनताको घरदैलो कार्यक्रममा हिडिरहेका छन् । काठमाण्डौ महानगर वडा नम्वर ७ का स्थाई बासिन्दा तथा युवा नेता लामिछानेसंग केटिएम खवरका लागि रवि भट्टराईले विशेष सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
चुनावको संघारमा रहेका छौँ ।, कस्तो छ व्यस्तता ?
ब्यस्तै छु । पार्टीले स्थानिय निकायको चुनावमा वडाअध्यक्षको टिकट दिएर जनताको सेवा गर्ने अवसर जुटाई दिएको छ र हामी सम्पुर्ण टिम सहित जनताको घरदैलोमा छौ ।
भ्रष्टाचार रहित २१औँ शताब्दि सुहाउँदो स्थानिय निकाय बनाउँने सपनाका साथ दिन र रात नभनि म आफ्नो जिम्मेवारी निभाई रहेको छु । जनतको घर दैलोमा हामी पुगेको छौँ । पार्टीको निर्देशन अक्षरस पालना गर्दै, मेरा अग्रजहरुको अनुभव र आशिर्वादलाई आत्मसाथ गर्दै सम्पुर्ण पार्टी संगठन चुनाबमा होमिएको छ । नेपाली कांग्रेस सिंगो पार्टी चुनाब जित्ने र जनताको विकास सहितको सेवा, निकास सहितको सेवा दिन कुनै कन्जुसाई नगर्ने पक्षमा सम्पुर्ण पार्टी पङ्ति लागेको छ । म प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ । मलाई सहयोग सद्भाव गर्ने टोलबासी आमा–वुबा, दाजु–भाई, दिदी–वहीनीले हामी प्रती जुन सद्भाव राख्नु भएको छ । त्यसले अझ थप जिम्मेवारी थपिएको महशुस गरेको छु ।
निर्धक्कसंग चुनाव जित्छौ जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, यसका आधार के के हुन ?
चुनाव जित्ने आधारहरु प्रशस्तै छन् । संस्कृतमा एउटा स्लोक छ जननि जन्म भुमिश्च स्वर्गा दपि गरियसी यसको मतलब आमा र जन्मभुमि स्वर्ग भन्दा नि प्यारो हुन्छ । हो यो हाम्रो जन्मथलो हो । हामी यहाँको माटोसंग परिचित छौँ । बरु हामी ज्यान दाउमा राख्न सक्छौ तर हाम्रो माटोलाई धोका दिदैनौ । यहाँको विकास निर्माण, जनताको सेवामा कुनै कन्जुसाई हामीबाट हुदैन । अर्को कुरा म प्रतिनिधि पात्र हु मेरो पछाडि सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टी छ । टोलबासी सम्पुर्ण दाजुभाईहरुको मया छ ।
कामनपा ७ का उम्मेदवार प्रवेश लामिछानेसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः